Hla Min (Lifelong Learner) – Page 300 – HlaMin
April 2018 Mingalar Celebrations There were two Mingalar (Auspicious) Celebrations on the 69er monthly breakfast gathering at Royal Rose (7 April 2018, Saturday) Birthday Mingalar for Mehm Aye Chan (M69) 45th Wedding Anniversary Mingalar for Ko Hla Myint Thein (C69) and Ma Myint Myint Than(C71) Thanks to the […]
March 2018 Saya U Maung Maung (George, ChE66) and Daw Eng Eng (youngest sister of Saya U Myat Thwin (ChE66, Texas)) hostedalunch gathering at Hong Kong Flower Lounge Attendees : Saya U Aung Myaing (ChE72, Bangkok) Daw Gyn Yu (ChE72, Bangkok) U Tun Shwe (ChE72) Daw […]
M75 M75 members paid respect to Sayagyi U Ba Than on September 25, 2017. Attendees include H.E. U Win Khaing U Tin Soe U Than Po U Hla Win U Ye Lin Oo U Zaw Min The group attended the birthday celebration ceremony and received blessing from sayargyi. […]
October 2008 Sayagyi U Ba Than was born on October 2, 1930 (Thursday). He usually celebrates his birthday by offering soon atamonastery and inviting his former colleagues and students to the soon kyway. There wasa“special” gathering for Sayagyi’s 78th birthday in 2008. October 2, […]
The 75 mechanical batch paid homage to sayagyi U Ba Than on 25, September, 2017. HE U Win Khaing and fellow classmates, Ko Tin Soe Ko Than Po, Ko Hla Win, Ko Ye Lin Oo, Ko Zaw Min … attended the birthday celebration ceremony and received blessing from […]
At Half Moon Bay (on September 3, 2017) We attendedaSoon kwyay in memory of Uncle U Wah Kyu , father of Ko Maurice Chee (M75). Saya U Soe Paing and Ma Alice During Saya’s visit to the San Francisco Bay Area, we visited Saya U Tin […]
Ma Win Mar Oo, co-owner of Winner Inn & daughter-in-law of Sayagyi U Ba Than, was requested by Saya U Tin Htut (M60) to ask her uncle [former saya andasuccessful real-estate developer] U Tin Win (M59) to come to Winner Inn. There wasalively conversation […]
ဒီနေ့MES မှာကျင်းပတဲ့လစဉ်ဗဟိုကော်မီတီအစည်းအဝေးမှာ ယခင်အခါများထက်ထူးခြားစွာ မျိုးဆက်သစ်အင်ဂျင်နီယာများအရေး ကို အချိန်များစွာပေးပြီးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြတာ အလွန်ပီတိဖြစ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂါတ်တိုင်းပြည်အရေးအတွက် မျိုးဆက်သစ်အင်ဂျင်နီယာများကို အသေအချာ စီမံချက်ချမှတ်ပြီး လက်ရှိ အခြေအနေကနေပိုမိုပြီး စနစ်တကျရှိရှိ ထိထိရောက်ရောက်အောင်မြင် တိုးတက်အောင် မဖြစ်မနေ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ကြ ဘို့ အားလုံးသဘောတူကြပါတယ်။ ပထမဆုံး မျိုးဆက်သစ်အင်ဂျင်နီယာများအရည်အသွေး။ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ၊ တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးရေးများကို ရေရှည်၊ရေတို စီမံချက် စာတမ်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးဖတ်ကြားဆွေးနွေးစေမဲ့Workshop တစ်ခု အမြန်စတင်ဆောင်ရွက်ဘို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အင်ဂျင်နီယာလူငယ်များပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာရှင်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များမှ ဆရာဆရာမများ။ မျိုးဆက်သစ်အင်ဂျင်နီယာများ(ကိုယ်တိုင်)။ လူငယ်ဖွံ ဖြိုးရေးအတွက် […]